Nin kamid ah mucaaradka Koonfurta Sudan oo dil lagu xukumay - BBC News Somali
Nin kamid ah mucaaradka Koonfurta Sudan oo dil lagu xukumay
Afhayeenkii hore ee xisbiga mucaaradka Koonfurta Sudan, ayey maxkamadi ku xukuntey xukun dil ah, kadib markii lagu soo eedeeyey khiyaano qaran.
James Gatdet Dak, oo kamid ah ururka mucaaradka ee SPLA-IO, ayaa ku jirey xabsi illaa iyo bishii November 2016-dii, markii uu ku sheegay barta bulshada ee facebook-ga, inuu taageerayo ka eryidda taliyaha ciidamada Qaramada Midoobey ee nabad ilaalinta u joogga Koonfurta Sudan.
Wuxuu ku noolaa James Kenya, halkaasoo uu ka helay magan galyo qaxooti. Kadib markii uu daabacey warbixintii buuqa dhalisay, waxaa laga eryey dalka Kenya.
Markuu dib ugu noqday Koonfurta Sudan, waxaa la hor geeyey maxkamad isagoo lagu eedeeyey khiyaano qaran, iyo eedeymo kale.
Bishii hore, qareenadiisa ayaa sheegay in maxkamadda ay carqaladeyneyso xabad joojintii iyo heshiiska u dhaxeeya dowladda iyo mucaaradka, kaasoo tilmaamaya in dhammaan maxaabiista siyaasadda u xir xiran in lasii daayo.
Markaa kadibna, waxey dib ula noqdeen keeskii ay maxkamadda ka fureen, iyagoo ka cabanaya sida ay wax u socdaan.
Haatan wuxuu heystaa James Gatdet labo toddobaad, si uu racfaan uga qaato go'aanka maxkamadda.
Inkastoo ay xabad joojin aan cago badan ku taagneyn labada dhinac ee dagaalka ka dhaxeeyo, haddana wali isku dhacyada way sii socdaan.
Inkastoo ay jiraan wada hadalo loogga gol leeyahay in nabad looggu keeno dalkaasi dagaalku hala keeyey, haddana waxaa jira caqabado lasoo gudboonaadey.